“महासंघले साना तथा आम व्यवसायीको विषयमा वकालत गर्नु पर्छ”- दिनेश श्रेष्ठको अन्तरवार्ता « Arthabazar.com
“महासंघले साना तथा आम व्यवसायीको विषयमा वकालत गर्नु पर्छ”- दिनेश श्रेष्ठको अन्तरवार्ता
प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७७, बुधबार १४:२७
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिक आएसँगै उम्मेदवारहरु उत्साहित बनेका छन् । आफुले पुर्याएको योगदान र आगामी दिनका कार्ययोजना सहित मत आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना तिब्र बनिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा शेखर गोल्छा समुहबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवरी दिएका दिनेश श्रेष्ठ आफुले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । मंसिर १३ गते हुन गईरहेको निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा अएको देखिन्छ, यस्तो अवस्था आउनुको कारण के हो ?
उद्योग वाणिज्य महासंघ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्ने होइन । विगतका नेतृत्वको तुलनामा अहिलेको नेतृत्वले पनि काम गरेको छ । तर, हामीले गरेका कामहरुको प्रचार प्रसार नभएको हुनाले कमजोर भएको जस्तो देखिएको हो । भवानी राणाको नेतृत्वमा महासंघमा काम गर्दै गर्दा भएका बाधा ब्यवधानहरु कसले र किन गरेको भन्ने विषयमा सबै जानकार नै छन् । यति हुँदा पनि धेरै कामहरु प्रशंसनीय छन् । सबैले सहयोग गरेको भए अझै राम्रो परिणाम आउने थियो ।
संविधान बनाउँदा देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले ब्यवसायीलाई हित हुने गरी कामहरु भएका छन । त्यसका साथै उद्योगी व्यवसायीसंग छलफल नै नगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरुमा समेत सरकारलाई कन्भिएन्स गरेका छांै । प्यनमा दर्ता नभई खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्थालाई सरकारले एक वर्ष पछि पुनरावलोकन गरेको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजको दरमा २ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाले लिने गरेको सेवा शुल्कमा समेत कमी आएको छ ।
त्यसैले पछिल्लो समयमा महासंघको नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने गरी काम गरेको स्पष्ट छ । महासंघले गरेका यी काम नै पुर्ण होइन । महासंघले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने अझै धेरै काम छन । ती कामहरु गर्नका लागि महासंघ सक्षम पनि छ ।
तपाइले जिल्ला नगर तर्फवाट केन्द्रीय उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनु भएको छ । तपाइको उम्मेदवारी किन ?
पछिल्लो तीन वर्ष म जिल्लासँग प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने अवसर पाएँ । जिल्ला नगरका साथीहरुले परिपक्व निर्णय गर्दै स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई बुझेर नेतृत्वमा आउन जिल्ला नगरका साथीहरुको आदेशले गर्दा नै मैले उम्मेदवारी दिएको हो । जिल्ला नगरमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक मात्र सेवा दिन नसकेको तथा त्यहाँका समस्याहरु सरकार समक्ष पुर्याई समाधान गर्न सक्षम केन्द्रीय नेतृत्व हुनु जरुरी भएको भन्दै साथीहरुले मलाई ओदश दिएको हुनाले सोही आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दे उम्मेदवारी दिएको पनि हुँ ।
जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघको सशक्तीकरणको आवश्यकता छ । त्यसका लागि काम गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि कम्पनी दर्ताका लागि संघले दिने सिफारीस देखि आम्दानी सुनिश्चितताका साथै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको पैसा जिल्लाहरुले नपाउने समस्याका विषयमा आवाज उठाउने मेरो लक्ष्य छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको पैसा निर्यात हुने जिल्लाले पाउने तर, उत्पादन भएको जिल्लाले नपाउने भन्ने जायज मागका लागि आवाज उठाउने काम गर्नेछु ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरु दर्ता गर्दा स्थानीय तहले गर्ने । तर, त्यसवाट उब्जेको पैसा आयकर भन्दा पनि धेरै हुने गरेको अवस्था छ । यसरी दर्ता तथा जरीवानाको रुपमा आएका पैसा महासंघ र स्थानीय निकाय, महासंघ र प्रदेश सरकार तथा महासंघ र केन्द्र सरकार मिलेर व्यवसायीलाई सचेतना कार्यक्रम गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्नका लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हो ।
त्यसका साथै उद्योग धन्दाका तथ्याङक राख्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यसरी उठेको पैसाको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम जिल्ला नगरले पाउने विषयलाई वैधानिकता दिनका लागि पनि लाग्नु पर्नेछ । जिल्ला नगरका साथीहरु सबै मिलेको अवस्थामा हामीले यी बाहेकका अन्य धेरै काम पनि गर्न सक्छौ । बैंकहरुले लिने ब्याजदरलाइ कम गर्न सक्छौ । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले मनपरी रुपमा लिने सेवा शुल्क त घटाएर देखाइसकेको अवस्था छ ।
उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मात्र नभै नयाँ आउने उद्यमीलाइ समेत आवश्यक सुचना दिनका लागि उद्योगी बाणिज्य संघहरुलाइ सबल बनाउन जरुरी छ । त्यसका साथै जिल्ला नगरका उद्योग व्यवसायको लागि गर्नु पर्ने कामका सन्दर्भमा समेत तयारी गरिसकेको अवस्था छ । हामीले तयार गरेको खाकाको सन्दर्भमा चुनाव सकिएको एक महिना भित्र जिल्ला नगरका साथीहरु विच छलफल गर्नेछौं । जिल्ला नगरका साथीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर आगामी १० वर्षका लागि मागदर्शन बनाउने तर्फ हामी लागेका छौ ।
जिल्ला नगरका साथीहरुले स्थानीय तहका उद्योग व्यवसायका सामान्य भन्दा सामान्य समस्याको सन्दर्भमा पनि महासंघको नेतृत्वले बोल्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन । ]
अब आउने नेतृत्वले यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा महासंघको शाख झनै खस्कने अवस्था रहने देखियो नि ?
यो सही कुरा हो । जिल्ला नगरका साथीहरुले हाम्रो समुहलाई निर्वाचित गर्नु भएको खण्डमा चुनाव सकिएको ६ महिनामा महसुस हुने खालको काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गदर्छु । अहिले एउटा समुह नेतृत्व पनि नचाहिने गरी आफै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उन्मादका साथ अघि बढेको देखिन्छ । कुनै एक समुहले हाम्रो नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिन्छां पनि भनेका छन् । यस्ता विषयहरु प्रति जिल्ला नगरका साथीहरु सचेत भएर हाम्रो टिमलाई विजयी गराउने अभियानमा जुट्नु भएको छ । साथीहरुले हाम्रो टिमलाइ बिजयी गराएपछि हामीले जिल्ला नगरका साथीहरुले अनुभुती गर्ने गरी सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं । सोही अनुसार काम पनि गर्छौ ।
हामीले चुनाव जितेको ६ महिनासम्ममा जिल्ला नगरका साथीहरुलाइ हामीले काम नगरेको भन्ने लागेको खण्डमा हटाउने अधिकार पनि उहाँहरुसंगै छ । जिल्ला नगरका समस्या ठुला उद्योगी व्यवसायीका लागि सानै हुन्छ । ठुला व्यवसायीलाइ सानो समस्याले खासै असर नगरेपनि साना तथा मझौला उद्यमीका लागि तीनै समस्या ठुला हुन्छन । देशैभरी सञ्जाल रहेको उद्योग बाणिज्य महासंघले एक स्थानको उत्पादन सहज रुपमा अर्को स्थानका बिक्री गर्ने बातावरणको विकास मात्र गर्न सकिएको खण्डमा पनि ठुलो काम हुनेछ ।
कुनै एक व्यक्तिले देशै भरी उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको भन्दैमा महासंघको नेतृत्वमा आउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन । एसोसिएट्सवाट नेतृत्वमा पुग्नु भएकाले जिल्ला नगरलाई जसरी अघि बढाउन लाग्नु भएको छ । यो साच्चीकै मनन योग्य कुरा हो । हामी स्पष्ट विचार सहित बोलेको हुनाले नतिजा ल्याउने गरी अघि वढेका छौ । अहिले जिल्ला नगरको उत्पादनले बजार नपाएर खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई आवश्यक बजार खोज्नका लागि सकरात्मक भुमिका हामीले खोल्नेछौ ।
विगतमा महासंघको पहलमा नै एक जिल्ला एक उत्पादनको अवधारणामा काम सुरु भएको थियो, यस्तै केही सोच्नु भएको छ ?
एक जिल्ला एक उत्पादनको अवधारणामा महासंघले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरेको हो । अहिले राज्यको संरचना परिवर्तन भएपछि कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थमा राज्यले गर्ने काम केन्द्रवाट प्रदेशमा गएको अवस्था छ । प्रदेशले फेरि स्थानीय निकायमा पठाएको छ । महासंघपनि राज्यको नयाँ संरचना अनुसार गएको छ । यति हुँदै गर्दा कानुनको अभाव भएको अवस्था हो । स्थानीय निकायहरु कानुन बनाउन लागि रहेका छन । त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमको काम नभएको जस्तो देखिएको हो । यो कार्याक्रम अन्तर्गतको पैसा केन्द्रले प्रदेशमा र प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाएको अवस्था छ । राज्यको संरचनामा भएको परिवर्तनले गर्दा काम भैसकेको भने छैन । यो मात्र नभई जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनका लागि धेरै काम गर्नु पर्नेछ । एक जिल्ला एक उत्पादनको जस्तै अरु नयाँ कार्यक्रम अघि सार्ने र त्यसको कार्यान्वायनमा सरकारसँग मिलेर काम गर्ने योजनामा हामी छौं । त्यसैले पनि सबल र सक्षम जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघ भन्ने नारालाई हामीले बुलन्द पारेका छौं ।
उद्योग वाणिज्य महासंघमा विगत देखि देखिदै आएको ठुला र साना उद्योगी व्यवसायी विचको द्धन्द्ध अन्त्य गर्नका लागि तपाइको समुहले चुनाव जितेको खण्डमा के पहल गर्ने योजना छ ?
जिल्ला नगरका साथीहरुको सहयोग पाएको खण्डमा यो कुनै ठुलो कुरा होइन । महासंघले ठुला व्यवसयाीको विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । गर्नु पनि पर्छ । तर, साना तथा आम व्यवसायीको विषयमा पनि महासंघ बोल्नु पर्छ । यो विषय ठुलो पनि होइन । महासंघले सैद्धान्तीक विषयहरुलाई उठाउने भएकाले सानो ठुलो भन्ने हुदैन । तर, साना उद्योगी व्यवसायीको विषयमा महासंघले गर्नु पर्ने कुरा भनेको उपभोक्ता संरक्षण हित ऐनमा भएका अव्यवहारिक विषयलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । उनीहरुले बनाउने ऐन कानुन उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको छ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने कानुन बनाउनेले उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन पनि बनाएको अवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीलाइ नियन्त्रण गर्नु पर्छ । तर, कार्यान्वयन योग्य ऐन कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नु पर्छ । अहिले ढक तराजु ३५ दिन भित्र नविकरण नगरेको खण्डमा जेलमा राख्ने कानुन बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा कानुन बनाउँदा हिजोको जरीवानामा सुन्य थप गर्ने, वा को ठाउँमा र राख्ने, एक महिनाको जेल साजायको ठाँउमा एक वर्ष गर्ने गरेर हतारमा झारो टार्ने किसिमले कानुन निमार्ण गरिएको छ । गत असोज भित्र बनाइसक्ुन पर्ने भएकाले यस्तो गरेर कानुन बनाइएकोमा हाम्रो असहमती छ ।
छुट्टै चेम्बर ऐन बन्नु पर्छ, क्रेडिट ऐन, व्यवसायीको लगानी पनि सुरक्षित गरी सुरक्षित कारोबार ऐन आउनु पर्छ । अहिले कारोबार ऐन छ तर, त्यसका केही प्रावधानहरु गलत छन् । राज्य संयन्त्रका कर्मचारीले हामी प्रति देखाउने ब्यबहार गलत छ । यसकारणले पनि व्यवसायीहरुले नचाहेर पनि गलत बाटो अपनाएर व्यवसाय गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
कर्मचारीलाइ कारबाही गर्ने भनेको विभागीय कारबाही रे । त्यो पनि गलत नियत देखिएको खण्डमा मात्र कारबाही गरीने भनिएको छ । कर्मचारीको नियत गलत र सही भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरुले कुनै निश्चित व्यक्तिको निहीत स्वार्थका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
साना व्यवसायीले मिति नाघेको सामान चाहेर किनेको होइन । ६ महिना मात्र म्याद भएका उत्पादनहरु आयात गर्न भन्सारले किन दियो ? भन्सारको त्यो कर्मचारीलाइ कारबाही गर्नु पर्छ की पर्दैन ? अब हाम्रो खुला सिमाना आर्थिक रुपमा शिल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । करका दरहरु उच्च भएका कारण बोर्डरमा नेपाली क्षेत्रको व्यवसाय सुन्य अवस्थामा छ भने छिमेकी देशपट्टी चहलपहल छ ।
सरकारले द्धन्द्धका कारणले खर्च धेरै आम्दानी थोरै भएको भन्दै १० प्रतिशतको भ्याटलाई ३ प्रतिशतले वढाएर १३ प्रतिशत कायम ग¥यो । अहिलेको अवस्थामा द्धन्द्ध त छैन । त्यसैले भ्याटको दरलाई घटाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । करका दरहरु धेरै भएको खण्डमा चोरी पैठारी बढी हुन्छ । अनियमित कारोबार धेरै हुन्छ । कर, भन्सार, रोजगार तथा बैंक सम्बन्धमा धेरै समस्याहरु छन । यस्ता समस्याहरुलाइ समाधान गर्नका लागि महासंघ लागि पर्नेछ ।
हाम्रो समुहमा यी सबै समस्याका कारण र समाधानका बाटोहरु पहिल्याउने क्षमता राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । यसमा देशभर साना तथा ठुला सबै उद्योगीको प्रतिक्रिया लिएर अघि वढ्छौ । यसमा राज्यले पनि नीजि क्षेत्रवाट के चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नु पर्छ ।
चुनाव नजिकिँदै छ, मतदाताहरु कत्तिको अलमलमा परेको अनुभव गर्नु भएको छ ?
मदाताहरुले दुबै समुहको कुरालाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेको देखिन्छ । मतदाताहरु यताको टिम र उताको टिम भन्दा पनि दुबै तर्फ आउने जाने गर्नु भएको छ । मतदाता साथीहरु कसैको दास पनि होइन । वहाँहरु स्वतन्त्र भएको हुनाले हाम्रो टिम विजयको नजिक रहेको स्पष्ट छ । स्वविवेक प्रयोग गर्दा सही निर्णय लिनका लागि साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
नेतृत्व भनेको संकटको सारथि हो, म सारथि बनेर जिम्मेवारी पूरा गर्छु : चन्द्रप्रसाद ढकाल(अन्तरवार्ता)
मुलुकका निजी व्यावसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न चुनावलाई लिएर यतिखेर
स्थानीय तहले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न सक्ने कर प्रणाली अपनाउनु पर्छः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा
अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा प्रिमियम कम, रिस्क हाइ छ
निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ४० वर्ष भन्दा लामो समय देखि कार्यरत छन् एस.के. तमोट
इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्शनकाे मुल समस्या नितिगत ब्यवस्था नै होः निलेशमान सिह प्रधान
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड नेपालमा वित्तीय कारोबारको क्लियरिङ हाउसको कार्य गर्ने पब्लिक लिमिटेड
लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई भने- यी सात काम भए पूँजीबजारका समस्या र…
सहकारी नेतासंग अर्थमन्त्रीले राखे यस्तो माग
१६७८ निको हुँदा, संक्रमित र मृतकको संख्या कति ?
ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीलाई आयो यस्तो खबर,बार्षिक बिदा लिदा यी…
तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपीओ मंगलबार देखि , कस्ले कति कित्ता भर्न पाइन्छ ?